सेयर बजार बढ्नुमा ब्याजदरको प्रभाव कि अन्य कारण ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सेयर बजार बढ्नुमा ब्याजदरको प्रभाव कि अन्य कारण ?
पुस अन्तिम सातादेखि नेपालको सेयर बजार निकै चलायमान भएको छ । लामो समयदेखि ४० प्रतिशत घटेर करिब स्थिर अवस्थामा रहेको सेयर बजारमा रौनक फर्किएपछि सेयर विश्लेषकहरू पनि जुर्मुराएका छन् । धेरै नयाँ विश्लेषक जन्मिएका छन् । ब्रोकर कार्यालयदेखि चिया पसलसम्म सेयरका गफ चुटिन थालेका छन् ।
कतिपयले सेयर बजारमा ‘खेलाडी’को प्रवेश भएको अनुमान गरेका छन् भने कतिपयले निक्षेप र कर्जामा ब्याजदर घटेका कारण सेयर बजार चम्किएको तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अनलाइन सेक्युरिटिज प्रालिमा बिहीबार भेटिएका एक लगानीकर्ताले बजार हल्लाको भरमा बढिरहेको र बढ्नुको कुनै कारण नभएको गफ नजिकै रहेका साथीलाई दिइरहेका थिए । ती साथीले पनि हँ मा हँ मिलाइरहेका थिए ।
सेयर बजार हल्लाको भरमा बढ्दैन र घट्दैन पनि । कुनै ठोस कारणबिना नै बजार घटबढ हुनेभए यति लामो समय बजार ४० प्रतिशत हाराहारी घटेर सोही अवस्थामा रहिरहने थिएन । बीचबीचमा बजार बढाउन ठूलै प्रयास भएका थिए । लगानीकर्ता आन्दोलित भए, अर्थ मन्त्रालयमा डेलिगेसन जाने काम भयो, सडकबाट अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागियो तर सेयर बजार बढेन ।
अहिले बढिरहेको छ र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पद पनि खुस्किएको छैन । विश्लेषक एवं ब्रोकरहरू हल्लाले सेयर बजार एक‑दुई दिनमात्र घटबढ हुने बताउँछन् ।
किन बढ्दैछ बजार ?
अहिले बजार बढ्नुको मुख्य कारण तरलता सहजता नै हो । ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष भरत रानाभाट अहिले ब्याजदर घटेरभन्दा पनि तरलता सहज भएर बजारमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको बताउँछन् । ‘ब्याजदर सामान्य मात्र घटेको छ,’ उनले भने, ‘तर कर्जा जति पनि पाउने अवस्था छ, त्यही भएर सेयर खरिद बढी भएको हो ।’ अहिले दैनिक १ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भइरहेको छ ।
ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष भरतराज रेग्मी पनि यही तर्क गर्छन् । उनका अनुसार ब्याजदर खासै नघटे पनि तरलता सहज छ । ‘त्यसको असर सेयर बजारमा परेको हो,’ उनले भने, ‘साथै लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढेको पाइन्छ ।’ बजार उकालो लाग्दै जाँदा नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने रेसियो पनि बढेको उनले जानकारी दिए ।
मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर ११.९३ प्रतिशत छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा ब्याजदर १२.०२ थियो । यो भनेको करिब ०.९ प्रतिशतमात्र कम हो । यसको प्रभाव बजारमा प्रभाव खासै पर्दैन । ‘तर भविष्यमा ब्याजदर अझै घट्छ भन्ने अनुमानमा पनि सेयरमा लगानी बढाएको पाएका छौं,’ रेग्मीले भने ।
अहिले बैंकले बचतमा दिने ब्याजदर पनि घटेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने औसत ब्याजदर ६.८ प्रतिशत कायम छ । जसमध्ये वचतमा औसत ४.९९ प्रतिशत, मुद्दतीमा ९.७२ प्रतिशत र कल निक्षेपमा ४.१६ प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका सिइओ भुवन दाहालका अनुसार अहिले तरलता निकै सहज छ । बैंकहरूमा कर्जा‑निक्षेप अनुपात औसत ७६.५ प्रतिशत छ । यो भनेको निकै सहज अवस्था हो ।
ब्याजदर सामान्य हुँदा पनि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । बजार सुस्ताएका बेला निक्षेपमा ब्याजदर उच्च हुँदा लगानीकर्ताले ब्याज नै खाए । अहिले नेप्से धेरै डाउन भएको र निक्षेपमा ब्याजदर न्यून हुँदै गएका बेला सेयर बजारबाटै बढी प्रतिफल पाउन सक्ने आशामा लगानीकर्ता देखिन्छन् ।
अर्को तर्क पनि छ । लाभांशमार्फत मात्र नभएर साँवा वृद्धिबाट पनि इक्विटीमा प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । त्यही भएर बजार घटेका बेला बुझेका लगानीकर्ता प्रवेश गर्छन् र नाफा बुक गर्छन् । असोजमा लाभांश बाँड्ने कम्पनीको सेयर अहिले किन्ने हो भने आठ महिनामै प्रतिफल पाइन्छ ।
बजार बढ्नुको अर्को कारण पनि छ । अहिले उद्योग क्षेत्रबाट कर्जाको माग सुस्ताएको छ । गत वर्षको तुलनामा पाँच महिनामै ४०‑५० अर्बले आयात घटेको छ । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य लगानीको क्षेत्र आयात पनि भएको बताउँछन् । ‘आयात नै घटेपछि कर्जाको माग कम हुने भइहाल्यो,’ उनले भने ।
उद्योग र व्यापार क्षेत्रबाट कर्जा माग नहुँदा समस्यामा परेका बैंकहरूले ‘मार्जिन लोन लैजानुस्’ भनिरहेका छन् । ‘व्यापार नहुनुभन्दा सेयरमै जाओस् भनेर पनि बैंकरहरूले ठूला लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुनसक्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा मार्जिन लोन कम दिएका बैंकले अहिले बढाइरहेको पाइएको छ ।’
सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई सेयर के कारणले बढ्यो भन्दा पनि बजारमा कतिबेला प्रवेश भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछन् । ‘अब सरकारले खर्च बढाउला, तरलता झन् सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्योभन्दा मुख्य कुरा बजार धेरै घटेको बेला प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताले कमाउँछ, दीर्घकालका लागि लगानी गर्नेले झन् धेरै कमाउँछ ।’
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सेयर बजारका हरेक तल‑माथिबाट नाफा हत्याउने तपाईंको प्रयासले तपाईं धनी बन्ने कुनै निश्चितता छैन तर नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र ब्रोकर भने अवश्य धनी बनिरहेका हुन्छन् ।’
फेसबुकमा उनको अर्को पोस्ट पनि मननीय छ, ‘तपाईंको पैसा, तपाईंको अधिकार, तपाईंको सेयर तपाईंको सम्पत्ति, किन्ने बेच्ने तपाईंको निर्णय, मेरो निर्णय आउँदो साउन‑भदौसम्म सेयर नबेच्ने । पैसा भए सक्दो किन्ने ।’
उनको संकेत अल्पकालीन लगानीकर्तातर्फ हो । बजार बढेका बेला हल्लाको भरमा र अरुलाई सोधेर भन्दा पनि ग्राफ हेरेर आफ्नो छनोटका कम्पनी किनियो भने कहिल्यै निराश हुन नपर्ने उनले बताए ।
सेयर बजार साताभरमा २७.९१ अंकले बढेको छ । आइतबार १२९७.४७ अंकबाट कारोबार खुलेको सेयर बजार साताको अन्तिम दिन बिहीबार १३२५.३८ अंकमा पुगेको छ ।
साताभरमा १ करोड ६२ लाख कित्ता सेयर ६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँमा खरिद‑बिक्री भएको छ । यो गत साताभन्दा २३.४५ प्रतिशत कम हो । गत साताभरमा २ करोड ५१ लाख कित्ता सेयर ८ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँबराबरमा किनबेच भएको थियो ।
साताभरमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ३३ करोड ४२ लाख, ग्लोबल आइएमइ बैंकको २९ करोड ४२ लाख, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्सको २१ करोड ६८ लाख, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको १७ करोड ९६ लाख र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको १७ करोड ६७ लाख रूपैयाँबराबरको सेयर कारोबार भएको छ । यी साताभरमा सर्वाधिक कारोबार हुने पाँच कम्पनी हुन् । सेयर संख्याका हिसाबले ग्लोबल आइएमइ बैंक, सूर्य लाइफ, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र ग्रामीण विकास लघुवित्त अगाडि छन् ।
प्रकाशित समय १५:०२ बजे
पछिल्लाे - कंगोमा फोर्सेजका लडाकूले गरेकाे आक्रमणमा २४ जना सर्वसाधारण मारिए
अघिल्लाे - नेकपा बैठकमा प्रदेशगत प्रतिवेदन प्रस्तुत